Geely ဟာ Guangzhou မှာတည်ထောင်မယ့် အာကာသကုမ္ပဏီမှာ ဂြိုဟ်တုနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစက်ကိရိယာတွေ တီထွင်ထုတ်လုပ်နေ - Pandaily
Geely ဟာ Guangzhou မှာတည်ထောင်မယ့် အာကာသကုမ္ပဏီမှာ ဂြိုဟ်တုနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးစက်ကိရိယာတွေ တီထွင်ထုတ်လုပ်နေ
Categories: Industry ကိုGloria Li မတ် 31, 2021 မတ် 31, 2021 မှာ Posted
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းကားထုတ်လုပ်သူ Zhejiang Gilley Holdings အုပ်စုက အင်္ဂါနေ့မှာ ကြေညာခဲ့တဲ့ သည်အစီအစဉ်ဟာ Southern Langzhou ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် Guangzhou မှာရှိတဲ့ South Space မှာ စီးပွားရေးအာကာသ ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တုနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေကို သုတေသနပြုဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၁ ရာစု စီးပွားရေး အစီရင်ခံစာသစ်တွင် “လေကြောင်းအာကာသကုမ္ပဏီ” ဟု အမည်ပေးထားသည့် “Time Exploration” က ယွမ် သန်း ၁၀၀ ကျော် (ဒေါ်လာ ၁၅.၂ သန်း) တန်ကြေးရှိသတင္းပို႔.
Glucky ဟာ အခြားဒုံးပျံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Nansha ခရိုင်မှာ တည်ရှိတဲ့ Nacco အပါအဝင် နာဆာတို့ကလည်း CAS အာကာသပညာအကယ်ဒမီကနေ ခွဲထွက်ပြီး ထွက်လာခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ South Sabar Science City ကို ၉၉ စတုရန္း ကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းေသာ အာကာသသိပၸံၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဒသတြင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး Coco Space Facilities ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္းတို႔တြင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒံုးပ်ံထုတ္ကုန္ေပါင္း ၃၀ ကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာကာသယာဥ္.
Glucky Technologies Group ၏ CEO ျဖစ္သူ Xu Chi Hoi က အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး South Shangha ခရိုင္သည္ ေဟာင္ေကာင္ခရိုင္၏ အဓိကတီထြင္မႈျဖစ္ေသာ “ System of the Great Innovative” ႏွင့္ “ South Zone Area” အတြက္ အလားအလာေကာင္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အာကာသကုမၸဏီေတြကို ေနရာေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္” ဟု Xu က ေျပာသည္။
ဒီ Hangzhou အခြေစိုက် ကားထုတ်လုပ်ရေး အဖွဲ့က တည်ဆောက်နေတဲ့ ထရမ့်ရဲ့ ခြေရာခံဂြိုဟ်တုဟာ လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ကြီးထွားလာနေတာကြောင့် မြန်နှုန်းမြင့် ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Raker သတင္းပို႔၂၀၂၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ စတင်ပြီး Glucky Motor က ဂြိုဟ်တုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Glucky ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘီလီယံနာသူဌေးကြီး Li Book က တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ပြည်တွင်းထုတ် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် ရိုးရာမော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေး နယ်ပယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း သိရသည်။ သည်ကုမဏီဟာ ဆွီဒင်ကားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Volvo Motor နဲ့ Daimler ကုမဏီတို့ရဲ့ ရှယ်ယာ ၉.၇ ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ Glucky ရဲ့ လုပ်ငန်းသုံးအပိုင်းမှာတော့ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှု၊ အစုန်ယာဉ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာနဲ့ ခရီးသွားကဏ္ဍတို့ ဖြစ်ပါတယ်။